Vahoakan’ny Tsihombe : Manohana ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaVahoakan’ny Tsihombe : Manohana ny fampandrosoana
Araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena hatrany dia miainga any amin’ny faritra Atsimo ny fampandrosoana an’i Madagasikara. “Mbola hamafisiko ary mbola hoteneniko foana fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara dia hiainga avy aty amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. Resy lahatra amin’izany aho, antony nahatonga ahy hanao ireo fotodrafitrasa maro samihafa aty amin’ny faritra atsimo, izay manomboka aty Anosy, Androy, Atsimo Andrefana. Fanamby ngeza be izany. Be dia be ny fanamby raha amin’ny lafiny ara-tsosialy. Hotohizana manerana ny faritra maro eto Madagasikara”, hoy ny Filoha. Tsy teny kobaka am-bava fotsiny ihany izany fa arahin’asa. Ho porofon’izany, dia fotodrafitrasa fototra telo sosona be izao no notokanan’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery, omaly tany amin’ny faritra Anosy sy Atsimo Andrefana. Nahazo trano fandidiana ny hopitaly be any amin’ny distrikan’Ampanihy Andrefana, faritra Atsimo Andrefana.
Ity toeram-pandidiana izay efa niasa nanomboka ny alarobia teo ary lehilahy iray mipetraka amin’ny 100 km miala an’Ampanihy, mararin’ny aretina amin’ny taovam-pananahana no nisantatra izany. Marihina fa trano vaovao vao naorina avy amin’ny vola madiodio ny fanjakana ity toeram-pandidiana ity, ary mahazaka marary 16, ahitana efitrano fandidiana roa, birao ny mpitsabo roa, efitrano iray fameloman’aina. Misy mpitsabo mpandidy iray, mpitsabo mpanampy miisa 4. Araka ny fanamarihan’ireo mpitsabo any an-toerana dia ampy ny fitaovana ary maimaim-poana ny fandidiana ary amin’ny ankapobeny azo atao ao avokoa ny fandidiana. “Azo eritreretina ny fandidiana amin’ny ankapobeny mety ho azo atao eto daholo. Misy ny fandidiana mavesatra toy ny fanalana ny tranon-jaza, ny “prostate” sns… eritreretina ho vita eto daholo fa misy lamina tsy maintsy apetraka eo amin’ny fametrahana ny fampidirana rà ka rehefa milamina izay dia azo atao eto an-toerana”, hoy ny fanamarihan’ny mpitsabo mpandidy, Dr Felix Miha Pascal.
Fantatra fa mponina mahery ny 375 000 ao anatin’ny kaominina 19 mandrafitra ny distrikan’Ampanihy Andrefana no heverina hahazo tombontsoa amin’ity trano fandidiana vaovao ity. Tena hanala fahasahiranana ireo mponina izany raha toa ka, tany amin’ny 300 km miala ny Ampanihy, izany hoe, any Toliara no ahitana trano fandidiana amin’ny fanjakana. Any Ejeda kosa izay 50 km sy Fitandrevo 90 km avy eo ihany koa misy toeram-pandidiana handoavam-bola. “Nanomboka tamin’ny 2017 hatramin’izao, efa 124 ny fandidiana dia 8 ny tranga ny “gyneco- obstestricale” tokony voadidy teto Ampanihy nalefa amin’ny hopitaly hafa. Fa noho ny tsy fisian’ny toeram-pandidiana dia nalefa any Ejeda saingy miakatra ny sarany satria mbola hanofa fiara ny marary dia handoa ny saran’ny fandidiana. Misy koa ny vehivavy saro-piterahana izay tena betsaka noho ny fanambadiana aloha loatra ka tsy maintsy atao fandidiana. Tena ilain’ny olona efa an-taonany maro ity toeram-pandidiana ity”, hoy ny Médecin inspecteur amin’ny hopitaly be Ampanihy, Dr Befanambina.
Fa nialohan’izay, nitokona toeram-pandidiana sy foibe fampiofanana arak’asa tany Tsihombe ny Filoham-pirenena. Fotodrafitrasa fototra izay miantraika mivantana amin’ny fiainan’ny mponina, satria tsy mila mandeha any Toliara na Taolagnaro intsony ny mponina raha hiatrika fandidiana fa vita ao an-toerana, ary tsy mila mandeha any Ambovombe intsony ny mpianatra raha hanao fianarana teknika. Ity farany izay ahitana ny fiofanana “gestion sy BTP”. Nandritra izay rehetra izay, dia nasehon’ny vahoakan’ ny faritra Atsimon’ny nosy fa manohana ny fampandrosoana entin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina izy ireo.